Xarumaha MGM waxay ku darayaan Cosmopolitan of Las Vegas boorsadeeda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Xarumaha MGM waxay ku darayaan Cosmopolitan of Las Vegas boorsadeeda
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Entertainment • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Wararka Raaxada • News • Dadka • jiga • Shopping • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
MGM Resorts International si ay u hesho hawlgallada The Cosmopolitan of Las Vegas si loogu tixgeliyo lacag caddaan ah oo dhan $ 1.625 bilyan, oo ku xiran hagaajinta raasumaalka shaqada ee caadiga ah.
MGM Resorts International waxay ku dhawaaqday macaamil ganacsi si ay u hesho hawlgallada The Cosmopolitan of Las Vegas
MGM Resorts International waxay heshiis la gashaa Blackstone si ay u hesho hawlgallada The Cosmopolitan of Las Vegas.
Kadib xiritaanka macaamilka, Xarumaha MGM waxay geli doonaan heshiis kiro oo 30 sano ah, oo leh saddex ikhtiyaar oo dib-u-cusboonaysiin ah oo 10-sano ah.
MGM Resorts International ayaa maanta ku dhawaaqday in Shirkaddu ay heshiis dhammaystiran la gashay Blackstone si ay u hesho hawlgallada The Cosmopolitan of Las Vegas si loogu tixgeliyo lacag caddaan ah oo dhan $ 1.625 bilyan, iyada oo ku xiran hagaajinta raasumaalka shaqada ee caadada u ah.
Qiimaha wax iibsiga wuxuu u taagan yahay tiro ku dhow siddeed jeer oo la hagaajiyay EBITDA, oo ay ku jiraan iswaafajin hawlgal oo la filayo iyo fursadaha kobcinta dakhliga ee la aqoonsaday.
Kadib dhammaadka macaamilka, MGM jiga waxay geli doontaa heshiis kiro oo 30 sano ah, oo leh saddex ikhtiyaar oo cusboonaysiin 10 sano ah, iyadoo ay iskaashi leeyihiin Stonepeak Partners, Cherng Family Trust iyo Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. hantida. Goobaha Dalxiiska ee MGM waxay bixin doonaan kirada sanadlaha ah ee bilowga ah $ 200 milyan, taasoo sii kordheysa sanadkiiba 2% 15 -ka sano ee ugu horreysa oo ka weyn 2% ama kororka CPI (oo lagu saleeyay 3%) intaas kadib.
“Waan ku faannaa inaan ku darno Cosmopolitan, dalxiis raaxo leh iyo casino ku yaal Las Vegas Strip, oo ku jira faylalkayaga, ”ayuu yiri MGM jiga Maamulaha guud & Madaxweyne Bill Hornbuckle. “Calaamadda Cosmopolitan waxaa laga aqoonsan yahay adduunka oo dhan saldhigeeda gaarka ah ee macmiilka iyo badeecad tayo sare leh iyo waayo-aragnimo, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon faylalkayaga iyo sii-wadidda aragtidayada ah inaan noqonno shirkadda madaddaalada ee ugu horreysa adduunka. Waxaan rajeyneynaa inaan ku soo dhaweyno martida iyo shaqaalaha Cosmopolitan qoyska MGM Resorts. ”
“In ka badan $ 500 milyan oo raasumaal ah ayaa lagu maalgaliyay hagaajinta guriga ilaa 2014, Cosmopolitan waxay bixisaa fursad aan la rumaysan karin si loo ballaadhiyo saldhigga macmiilkayaga waxayna siin doontaa qoto dheer oo xulasho ah martidayada Las Vegas, ”ayuu yiri MGM Resorts CFO Jonathan Halkyard. "Waxaan aaminsanahay inaan ka faa'iideysan karno khibradaha MGM Resorts ', madal hawlgal iyo is-waafajin kale oo aad loo gaari karo si aan u sii wadno bixinta adeegga heerka ugu wanaagsan, annaga oo kor u qaadeyna koritaanka hantida."
Kahor masiibada COVID-19 ee dabayaaqadii 12 bilood waxay dhammaatay Febraayo 29, 2020, Cosmopolitan wuxuu soo saaray $ 959 milyan oo dakhli saafiya ah iyo $ 316 milyan oo EBITDAR la hagaajiyay. Qeybtii labaad waxay dhammaatay Juun 30, 2021, hantidu waxay soo saartay $ 234 milyan oo dakhli saafiya ah iyo $ 92 milyan oo EBITDAR la hagaajiyay.